Amaholide ezithandani eParis | Izindaba Zokuhamba
Amaholide ezithandani eParis
UMariela Carril | | EParis, Ezothando
IParis yidolobha lezothando par excellence futhi kunemibhangqwana eminingi eza nethemba lokuphila izinsuku ezimbalwa zothando ihamba emigwaqweni yayo, izikhumbuzo zayo ezithandwayo nezindawo zayo zokudlela ezinhle.
Uma ucabanga ukuya eParis nengxenye yakho engcono, bhala lawa macebiso ukuze uguqule uhambo lube into enhle kodwa enhle romantic: izindawo zokuvakashela, izindawo zokudlela ongazidla nezitsha ukunambitha. Konke ngothando, uthando oluningi.
1 Ukuvakashelwa kwezothando eParis
2 Ukudla kwezithandani eParis
Ukuvakashelwa kwezothando eParis
Un ukuhamba okuncane emanzini eSeine akufanele ilahlekile. Kakhulu ikakhulukazi lapho umkhumbi we-cruise udlula ngaphansi kwe- UPont Marie futhi isiko likhombisa ukuqabulana. Isithombe nememori kuqoshwe ingunaphakade.
Mayelana neminyuziyamu, amahle Imisebenzi kaMonet iseMusée de l'Orangerie futhi uma bobabili babelana ngothando lwe-Impressionism, kuhle ukuma phambi kwale misebenzi egcwele imibala nokukhanya kokukhanya.
Khuphukela embhoshongweni we-eiffel Kungokunye okuphezulu, ikakhulukazi uma ungadla kwenye yezindawo zokudlela zayo ukuze ujabulele insizakalo yokunethezeka enemibono emihle yenhlokodolobha yaseFrance. Indlela enhle yokubalekela imigqa emide eyakhekayo, ikakhulukazi ngenkathi ephezulu, ukubhukha isidlo sakusihlwa, ngakho-ke gcina lokho engqondweni.
Uma ubuhle obungaka buhamba nawe futhi uthanda ukukhululeka ngokwengeziwe, ungakhetha i- ukuhamba nokudla kwakusihlwa ku-Quarter yesiLatin. Imigwaqo emincane yale ngxenye yeParis iyathandeka, kunezindawo ezincane, izitebhisi, ama-alleys, amathilomu nezindawo ezifihliwe.
El IParc des Buttes-Chaumont Ingenye yezindawo ezinhle kakhulu eParis njengoba inamawa, amathempeli nezimpophoma. Kusefayili ye- dolobha lama kwelithi 19 futhi ingenye yezindawo ezinkulu kakhulu edolobheni. Uma ungabaza ngokuhlala noma ukungavakasheli ipaki, khetha lokhu. Ungahamba nibambene ngezandla emizileni yayo, nidle okuthile futhi nithokozele nangaphandle. Okufanayo kokuthandwa kakhulu Ingadi yaseTuileries, ipaki yomphakathi enkulu kunazo zonke futhi endala kunazo zonke eParis.
El Ingadi yeTuileries Yenzelwe umuntu ofanayo owaklama izingadi ezinkulu nezinhle zaseVersailles, ngakho-ke uma ungeke uvakashele isigodlo, ungakucabanga lapha. Njengemininingwane eyengeziwe, i-UNERSCO isimemezele Amagugu Omhlaba e 1991.
Oscar Wilde ungomunye wababhali abathandana kakhulu emlandweni futhi ithuna lakhe lisemathuneni athandwayo ePère Lachaise. Sekuphele iminyaka eyisithupha kuvele kuneWall of Kissing ehlukanisa ithuna ngoba isiko bekungukushiya uphawu lwezindebe kulo. Kubhale u-Oscar Wilde Ukuqabula kungalimaza impilo yomuntu, ngakho-ke inkambiso.
Kukhona ingxenye yeParis ngaleso sikhathi futhi ibhayisikobho yenze ithandwa ngabantu abashadile baseParis uma kukhulunywa ngokuthatha izithombe zomshado: I-Pont de Bir-Hakeim, entshonalanga yedolobha. Uvele kwifilimu Inception y I-Tango yokugcina eParis, ngokwesibonelo, futhi ine-Eiffel Tower njengesizinda sangemuva. Elinye ibhuloho elidumile yi IPont des Arts ngezingidi zabo. Esikhathini esingengakanani esidlule ihlanziwe izingidi ngoba isisindo sayo sibeka ibhuloho engcupheni.
Ibhuloho engilithandayo, noma kunjalo, yi- Pont neuf "nama-nooks ayimfihlo" ayo anamabhentshi alungele ukuhlala izithandani, ube nombono wothando futhi uthathe isithombe. Hamba ku IVivienne Gallery Ibuye ibe nenhle yayo njengoba imipheme iyinhle enezitezi zomusa kanye nophahla lwengilazi. Yindawo enothando kakhulu futhi inezitolo, amathilomu nemigoqo yokulahlekelwa imizuzu embalwa.
Futhi uma uthanda ukubukwa ungaya ekushoneni kwelanga ngo- I-Tour Montparnasse engamamitha angama-210 ukuphakama futhi kuyisakhiwo sendawo yokuhlala sangempela.
Ukudla kwezithandani eParis
Isayithi elithandwa kakhulu ngenxa yethelevishini Kong. Kuyinto ingilazi yophahla lwengilazi lokho kuvele ochungechungeni Ucansi eDolobheni. Imibono yomfula iSeine mihle. Yavula iminyango yayo ngonyaka we-2003 futhi inezimo zomoya zesimanje kakhulu ngophahla lwengilazi nezihlalo ze-acrylic, ukwakhiwa komhlobisi ohlonishwayo uPhilippe Starck. Inomkhathi omuhle, i-cocktail bar egcwele kahle, kanye ne-cuisine enhle kakhulu.
Kuyinto esitezi sesihlanu sesakhiwo sikaHaussmann futhi iwindi ngalinye linombono ohlukile weParis: iPont Neuf, isakhiwo samaSamariya nesitayela sayo se-Art-Deco, iSiena, ikomkhulu leLouis Vuitton. Kukhona indawo yokubhema evulekile, i-chic kakhulu nomhlobiso wayo wegolide ngesitayela seLouis XVI, nemenyu okuthi, yize ingashibhile, ingabhubhisi iphakethe lakho.
Okuningi, uma uhlelo lwakho kungukuphuma kwezothando. Abaqalayo bangama-euro angama-20 noma angama-25, amakhulu phakathi kwama-euro angama-30 kuye kwangama-50 kanye nama-dessert kusuka ku-13 kuye ku-15 euro. Imenyu yesidlo sasemini iqala kuma-euro angama-35 futhi ungajabulela i- brunch ngamanani afanayo.
Uswidi ojwayelekile waseFrance yi macaroni Futhi noma zithengwa noma yikuphi kukhona okungcono kunezinye: ICarette isitolo esinezinto eziningi esizithandayo eduze ne-Eiffel Tower, eseChamps Elysees is ULaduree futhi nalabo be UJean-Paul Hévin, kepha uma ufuna ukunambitheka okungajwayelekile kukhona ama-macaroni we USadaharu Aoki, Isitayela saseJapan.
Esidlweni sasekuseni sothando awukwazi ukuphuthelwa okwandisa futhi phakathi kwezindawo ezinhlanu ezingcono kakhulu ongazithenga kukhona u-Eric Kayser (ku-rue Monge ne-1 euro kuphela), iGontran Cherrier (e-rue Caulaincourt) noma i-RDT e-rue de Turenne.
Ngakho-ke, uma uhambela eParis ngohlelo lokuthandana, hlanganisa noma yikuphi ukuvakasha esikuncomayo ngesidlo sakusihlwa esihle, nesidlo sasekuseni sangemuva komncintiswano nama-croissants nekhofi elihle. Ngeke ukhohlwe iParis.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Izindlela zokuphunyuka » Ezothando » Amaholide ezithandani eParis
IMars Emhlabeni: IRiotinto Mining Park